မန္တလေးနန်တော်ဟောင်းကြီးကို… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » မန္တလေးနန်တော်ဟောင်းကြီးကို…
- မျိူးချစ် နဂါး
Posted by မျိူးချစ် နဂါး on Aug 27, 2012 in Cultures | 17 comments
မန္တလေးနန်တော်ဟောင်းကြီးကိုမြင်ရတော့ ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့မဆိုင်သလို မပိုင်သလို အမြဲခံစားရတယ်။တကယ်ဆိုရင် မြန်မာ့သမိုင်း မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု မြန်မာလူမျိုးအားလုံးပိုင်နေရာကြီးပါ။ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ စစ်တပ်ဌာနချုပ် စစ်တပ်နေရာ စစ်တပ်နဲ့ သက်ဆိုင်သူတွေသာ ၀င်ထွက်ခွင့် နေထိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ နေရာဖြစ်နေခဲ့ တာပါ။သာမန်ပြည်သူတွေကတော့ လွတ်လပ်စွာဝင်ထွက်ခွင့် လေ့လာခွင့်မရတာ အားလုံးအသိပါပဲ။ပြောရရင် သီပေါမင်းပါသွားကတည်းက ပြည်သူတွေမန္တလေး နန်တော်ဟောင်းကြီးကို ဆုံးရှုံးခဲ့ ရတာ အခုချိန်ထိ လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။တကယ်တော့မန္တလေးနန်တော်ဟောင်းကြီးကို ပြည်သူတွေပဲ ပိုင်ဆိုင် ထိန်သိမ်းသင့်တာပေါ့။အခုဆိုရင် အဓမ္မအသိမ်းခံမြေယာတွေကိစ္စတောင်းဆိုဆောင်ရွက်ကြရာမှာမန္တလေးနန်တော်ဟောင်းကြီးကအမေ့ခံဖြစ်နေပါတယ်။မန္တလေးနန်တော်ဟောင်းကြီးကို
မြန်မာပြည်သူလူထုတွေ လက်ထဲပြန်ရောက်ဖို့ မြန်မာလူထုက ညီညာမှုနဲ့ပြန်လည်တောင်းဆိုသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ ယူဆပါတယ်။
About မျိူးချစ် နဂါး
မျိူးချစ် နဂါး has written9post in this Website..
View all posts by မျိူးချစ် နဂါး →
ရွှေရိုး (ရွှေမန်း-ဒိုင်အို) says:
လုံးဝ ရာနှုန်း ( ၁၀၀၀၀၀ ) ထောက်ခံတယ် ။ တခြားသူတွေကော ???
နန်းမြို့  ရိုးကို မှ အလွမ်းပြေကြည့်ခွင့် ရချင်သေးတယ်…
ဒို့မြန်မာတွေ ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်းအုပ်ချုပ်ခင်က ……….
စိတ်ဘ၀င် မှာ တကာ တကာ လွမ်းရပေါ့ကွယ်
အဲ အဲ အားဖြည့်ရမှာပေါ့ ထောက်ခံပါတယ်ရှင့်။
မှန်တယ်ဗျာ..မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့…ရာဇဝင် အထင်ကရ..နေရာပါ..တကယ်ဆို…လေ့လာလိုသူ..တစ်ခြားနိုင်ငံသားတွေစီကနေ. .နိုင်ငံခြားဝင်ငွေ..ယူလို့ရမယ့်နေရာပါ..ခု့တော့.. .မြန်မာလူမျိုးခြင်းတောင်..စိတ်နာတယ်ဗျာ..(..ဒါနဲ့..သတိ့ထားမိ့တာလေးပါ…သလွှင်တော်.. ဆိုတဲ့..အရာက..ရှေးခေတ်သုံးရော..ဟုတ်ရဲ့လားဗျာ.. .ရှေးခေတ်ကလူတွေ.. အရပ်အမောင်းနဲ့…ခု့လက်ရှိ့သလွှင်က… အတော်ကိုသေးနေတယ်.. ကလေးအိပ်..သာသာပဲရှိ့တယ်ဗျ..)
မျိူးချစ် နဂါး says:
စဉ်းစားစရာပါပဲ Ko aanyar thar ရေ….
ကျနော်တော့ဖြင့် မန်းလေးကို တစ်ခေါက်မှ မရောက်ဖူးတဲ့လူ ဖြစ်လေတော့ဗျာ ..
နန်းတော်ကြီး အကြောင်းကို သေချာ သိဘူးရယ် ..
ဒါ့ပုံတွေတော့ အများကြီး မြင်ဖူးတာပေါ့နော် ..
ခုလို ဆိုတော့ကာ ..
ကျနော်ကလည်း ထောက်ခံပါကြောင်း …
တောင်းပြီးဘာလုပ်မှာလဲ။ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ အစောင့်ထားဖို့စရိပ်တောင်ပိုကုန်ဦးမယ်။ ကိုယ့်စီးပွားကိုယ်ရှာစားနေရတာ အားအားယားယား အလကားအလုပ်ရှုပ်ခံလို့။
အလကားအလုပ်ရှုပ်မခံပဲကိုယ့်စီးပွားကိုယ်ပဲရှာစားနေကြလို့မြန်မာပြည်ဒီလိုဖြစ်နေတာပါ။ရပ်ကွက်ထဲက တဲစုတ်တောင်တာဝန်သိရင် ထိန်းသိမ်းလို့ ရပါတယ်…သူ့ ဟာသူတာဝန်သိသူတွေပေါ်လာမှာပါ။သင်လိုလူမျိုးတွေကလွဲရင်ပေါ့။နှမ်းတစ်လုံးနဲ့ ဆီမဖြစ်ပေမယ့် ဆီဖြစ်ဖို့အဲဒီနှမ်းတွေစုပေါင်းရတာပါ…
စစ်တပ်က သိမ်းတာ တရုတ် ကုလားသိမ်းတာလောက် ဆိုးနေလို့လား
တစ်ခြားမပြောနဲ့ နန်းတွင်း(mdy အခေါ်) ထဲက ထောင်နေရာမှာ တရုတ်တွေ ကုလားတွေ ပိုက်စက်ရုံ ပလက်စတစ်စက်ရုံတွေ လုပ်ခဲ့တာကြာ ကြာပေါ့
တက်ကသို ပေါင်းစုံက အတွဲပေါင်းစုံအတွက် ကွန်ဒုံးသုံးစရာ ဘိပျောက်သွားမယ်နော
ပြည်သူပိုင်ဖြစ်ရင် အဲဒါတွေကို အများဆန္ဒနဲ့ ရှင်းနိုင်တယ်လေ…အတွဲတွေနေရာပျောက်မှလဲ မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေမပေါ်မှာလေ…
ပေါ်ဘီ ပေါ်ဘီ ဒို့ကိုပေ ရိုးလှ ရိုးလှနဲ့ ဟွင်းဟွင်း :grin:
ထိန်ထိန်သိမ်သိမ်းနဲ့ အကောင်းမွန်ဆုံး ပြုလုပ်ထားပြီး
ပြည်သူတွေတင်မက နိုင်ငံခြားသားတွေပါ လေ့လာလို့ရအောင် လုပ်ထားသင့်တယ်လို့ထင်တယ်။
မန်းလေးမြို့ကိုလာလည်တဲ့ နိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေဆီက မန္တလေးမြို့အတွင်းက အထင်ကရ နေရာတွေဘု ရားကျောင်းကန်တွေအတွက်
၀င်ခွင့် us10$ ကောက်ခံထားပြီးသားပါ.